Akụkọ - Ozi ụlọ ọrụ
Maka imepụta ihe na-eguzogide corrosion na mpaghara nke ihu na kọntaktị na gas na-ekpo ọkụ nke nkụ ọkụ ọkụ, a na-emeso akụkụ ndị kwekọrọ na nkedo a na-eji oji ojii nke nwere ihe mmezi, ọkacha mma 40- 50% ferrosilicon, nke na-agbanwe mpaghara mpaghara nke nkedo nkedo a na-emebeghị ka ọ bụrụ akpụkpọ anụ nkedo
Mkpa maka ịchịkwa akụrụngwa dị oke mkpa maka ọganiihu nke mgbatị ígwè sitere na greensand system. A na-eleghara aja aja silica anya site na isi ihe na mgbakwunye bentonite. Enwere ike iwere ihe ndị nwere carbon dị ka "ihe ọjọọ dị mkpa" iji hụ na mmecha ihu ọma dị mma ma belata oke ntụpọ metụtara ájá. A na-eji ihe mgbakwunye ndị ọzọ eme ihe mgbe sistemụ na-esi na nguzozi na ndị a na-agbakwunye n'ihu na ụdị mgbagwoju nke greensand. Maka ihe nkedo chọrọ ihe ndị a, ọ ga - abụ nnukwu okwu dị ka ọtụtụ sistemu resin dị iche iche na - arụ ọrụ maka imepụta isi na ndị a ga - echebara echiche mgbe ị na - achịkwa ọkwa carbonaceous na ngụkọta nke usoro ájá.
Mmetụta ejima ahụ na carbon na ọnwụ na mgbanye na ngụkọta ngụkọta aja chọrọ nlezianya na njikwa. A na-enyocha usoro njikwa dị iche iche gụnyere usoro ọdịnala dịka volatiles na ọnwụ-on-mgbanye yana usoro mkpebi bentonite na usoro nhazi. A na-enyocha usoro njikwa ọhụụ dị ka carbon zuru oke yana ngwugwu nyocha na njikwa.
A na-elele usoro amụma dị iche iche anya dịka njiri mara. Àgwà nke ihe mgbakwunye na ọrụ ha na nke kachasị mkpa bụ na a na-eme ka mmekọrịta ha pụta ìhè, ebe nke a bụ mpaghara a na-elegharakarị anya dị ka ndị ikom foundry na-alụ ọgụ maka ihe ịga nke ọma n'ịgba ogo oge niile. A na-atụle ule nchịkwa na-abịa na-esonye na mgbakwunye na mgbakwunye.
Ihe nyochara bụ nsonaazụ nsonaazụ yana ihe achọrọ iji hụ njikwa yana nkedo kachasị mma na-agbanwe agbanwe site na greensand na usoro iji mesie nghọta na njikwa nke mgbakwunye carbonaceous na nsị arụmọrụ.